စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in ပြင်သစ် အတွက်ပြင်သစ်တွင်လေ့လာလိုသောကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ် of ပြင်သစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ပြင်သစ်လည်းအဖြစ်လူသိများ, ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ပြင်သစ် ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in ပြင်သစ်အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in ပဲရစ် သို့ လေ့လာချက် in ပဲရစ် in တက္ကသိုလ်က of ပဲရစ် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ပဲရစ် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ပဲရစ် ပညာရေး in လိုင်ယွန် သို့ လေ့လာချက် in လိုင်ယွန် in တက္ကသိုလ်က of လိုင်ယွန် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ လိုင်ယွန် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ လိုင်ယွန် ပညာရေး in အေသင် သို့ လေ့လာချက် in အေသင် in တက္ကသိုလ်က of အေသင် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေသင် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေသင်.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ပြင်သစ် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ပဲရစ် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in လိုင်ယွန် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in အေသင်
ပြင်သစ်ဥရောပအနောက်ဘက်စွန်းတွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ပဲရစ်ကိုကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်မြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များသည်နှစ်စဉ်ကျောင်းသား ၁.၅ သန်းခန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီး၊ ဤ ၁၀% ခန့်သောကျောင်းသားများသည်မတူညီသောတက္ကသိုလ် ၃၅၀၀ ကျော်တွင်နိုင်ငံတကာမှဖြစ်သည်။
အမြင့် ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးစနစ် ထူးချွန်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ သင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြင်သစ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနများ၌ထင်ရှားသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတက္ကသိုလ်အဆင့်မြောက်မြားစွာမှရရှိသောအထောက်အထားများကိုသင်ရရှိသည်။ ရှုထောင့်များစွာ၌ ပြင်သစ်တွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေး ထို့အပြင်ပညာရေးစနစ်၏စင်ဒရဲလားလည်းဖြစ်သည်။ အစိုးရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်၏ချမ်းသာသောနိုင်ငံများထက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုသာသုံးစွဲသည်။
ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်သုတေသန ၀ န်ကြီးဌာနတို့သည်နိုင်ငံခြားသားလျှောက်ထားသူများ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုအခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါ
ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါ ပြင်သစ်ပညာရေး | ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းတက်သည်
ပဲရစ်တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Lyon တွင်ကျောင်းတက်သည် | အေသင်၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ပဲရစ်မှာပညာရေး | Lyon ရှိပညာရေး | အေသင်ပညာရေး
ယနေ့ခေတ် ပြင်သစ်ရှိတက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောင်းသားများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားသောဒီဂရီအမျိုးမျိုးကိုစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ပြင်သစ်တွင်သိပ္ပံ၊ စာပေ၊ အနုပညာနှင့်သမိုင်းစသည့်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
အများဆုံး ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များ အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေနှင့်လက်လှမ်းပညာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂလိကအဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနများနည်းပါးလာသည်။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်ပညာရေး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားများသည်စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားသောဘွဲ့များကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်တွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနသုံးမျိုးရှိသည်။ တက္ကသိုလ်များ,, Grandes écolesနှင့် အထူးပြုကျောင်းများ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသောတက္ကသိုလ်များသည်တက္ကသိုလ်များမဟုတ်ဘဲ Grand Ecoles ။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းကာလများနှင့်ယှဉ် တွဲ၍ သူတို့၏ဇာစ်မြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်စနစ်, Grande ecoles ပြင်သစ်မှထူးခြားသောဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့သည်ကျောင်းသားများနည်းပါးသောကြောင့်အသေးစားများဖြစ်ကြပြီးအမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်အသီးသီးတွင်ကောင်းမွန်သောပညာရေးအဆင့်အတန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်လည်ချောင်းအလွန်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။
လိုင်စင် (L1, L2, L3) ဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်3 နှစ်ကြာချိန်ရှိခြင်း
မာစတာ's (M1, M2) က ဘွဲ့ရဒီဂရီ2 နှစ်ကြာရှည်လေ့လာမှုတစ်ခုကာလပြီးနောက်ချီးမြှင့်
A ဒေါက်တာဘွဲ့ 16 semesters (3 နှစ်, ဒါမှမဟုတ်စုစုပေါင်း 8 နှစ်လေ့လာမှု) ကြာရှည်လေ့လာမှုကာလပြီးနောက်ချီးမြှင့်သည်။
သို့ တက္ကသိုလ်များသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါလျှောက်လွှာပုံစံကိုတက္ကသိုလ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူပါ။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတစ်ခုထက်ပိုသောလျှောက်ထားလိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်သင့်သည် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်။
ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ပြင်သစ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်
ပဲရစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | လိုင်ယွန်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | အေသင်၌နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Paris တွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | Lyon တွင်နေထိုင်မှုအတွက်တွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | အေသင်၌လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှု
ပြင်သစ်ကောလိပ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ သေးငယ်တဲ့စာသင်ခန်းရှိသည်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ လည်ပတ်ရန်ပြတိုက်များများနှင့်စားသောက်ဆိုင်ကြီးများဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှစ်မြှုပ်နိုင်သည် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု၌တည်၏.
ပြင်သစ်တွင်၎င်းတို့တွင်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များရှိပြီးတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျူရှင်ခများရှိသည်။ အစိုးရတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျူရှင်ခသည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၈၉.၁၀ မှ ၃၉၆.၁၀ အတွင်းရှိသည်။
သုတေသနတက္ကသိုလ်များ၊ တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀
စီးပွားရေးကျောင်းများ - တစ်နှစ်လျှင် ၇၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ အထိ
ပျှမ်းမျှ ပြင်သစ်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ် မြို့ကြီးကြီးများတွင်တစ်လလျှင် ၇၅၀ မှ ၁၀၀၀ အထိရှိသည်။
အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောတိုက်ခန်းငှားရန်မှာတစ်လလျှင် ၉၄၃ ဒေါ်လာနှင့် ၁၂၃၈ ယူရိုဖြစ်သည်
အလယ်အလတ်စားစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်လူ ၂ ယောက်အတွက်သုံးမျိုးစားသောအစားအစာ - ၅၀ ယူရို
ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ | ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာ | ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ
လျှောက်ထားသူသည်ဒီဂရီမစတင်မီအနည်းဆုံး ၆ လလျှောက်ထားရမည်
သင်၏အင်တာဗျူးအပြီးတွင်နောက်ဆုံးဗီဇာမရရှိမီနောက်ဆုံးလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းသည်ရက်ပေါင်း ၁၅ မှ ၆၀ အထိကြာနိုင်သည်။
ဗီဇာအတွက်စံနှုန်းမှာ ၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်ယူရို ၇၁၄ မှ ၃၁၁ ယူရိုဖြစ်သည်
လျှောက်ထားသူများသည်သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားသူ၏ဘဏ်အကောင့်တွင်လစဉ်အနည်းဆုံး ၅၆၀ ယူရိုဖေါ်ပြခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့အထောက်အထားကိုပြသသင့်သည် ပြင်သစ်မှာနေ
ပြင်သစ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
ချင်သောကျောင်းသားများ ပြင်သစ်မှာအလုပ်လုပ် ကျောင်းပြီးပြီးနောက်အခြားအလုပ်ပါမစ်လျှောက်ရန်လိုလိမ့်မည်။
စဉ် ပြင်သစ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် သင်အလုပ်လုပ်မည့်ပြည်နယ်နှင့်အလုပ်ပေါ် မူတည်၍ အနည်းဆုံးလတစ်လလျှင် ၂,၂၀၀ ပေးရမည်။ အလုပ်သမားသည်တစ်ပတ်လျှင် ၃၅ နာရီအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
သို့ ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်တွင်လျှောက်ထားပါကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ တက္ကသိုလ်များသည်သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများအချို့အားဖြင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များ လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်။ ။ ပရိုဂရမ်သည်မည်သည့်အထူးပြုမှုအတွက်မဆို GRE၊ GMAT သို့မဟုတ် LSAT ကဲ့သို့သောနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရမှတ်များလိုအပ်ပါက။ ထိုအခါရမှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်သက်သေပြရမည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု IELTS, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်နိမ့်ဆုံးဘာသာစကားရသင့်သည် ပြင်သစ်တွင်တက္ကသိုလ်များ။
ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အေသင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ပြင်သစ်တွင်လေ့လာမှု ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအပါအဝင် ပဲရစ်ပညာရေး | Lyon ရှိပညာရေး | အေသင်ပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်၌တည်၏ ပြင်သစ်ရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ပြင်သစ်ရှိပြည်ပရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, ပြင်သစ်တွင်ထိပ်တန်းသင်တန်းများ, ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, ပြင်သစ်ရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, ပြင်သစ်ရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့်ပြင်သစ်၌များစွာသောပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းလူသိများတဲ့ \_ t ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်မှာ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက်တက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက်လည်းလူသိများ နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အတွက် ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်နှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အဘို့။
ပဲရစ်ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Lyon ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | စျေးချိုသောအေသင်မြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ပဲရစ်ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Lyon ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | စျေးချိုသောအေသင်မြို့ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးပြင်သစ်
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် ပြင်သစ်မှာ, တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် ပြင်သစ်တွင်လေ့လာရန်ပြင်သစ်၏
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ ပြင်သစ်ဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in ပြင်သစ် in ပြင်သစ်တွင်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး သို့မဟုတ် ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါ, ပဲရစ်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ပဲရစ်မှာပညာရေး သို့မဟုတ် ပဲရစ်မှာလေ့လာပါ, Lyon ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ Lyon ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် လိုင်ယွန်တွင်လေ့လာသည်, အေသင်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ အေသင်ပညာရေး သို့မဟုတ် အေသင်၌လေ့လာပါ ကျနော်တို့အပါအဝင်ပြင်သစ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံယူကြပြီ, ပဲရစ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , လိုင်ယွန်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အေသင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ပဲရစ်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Lyon တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ, အေသင်၌အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ အပါအဝင်ပြင်သစ်တွင်လေ့လာရန် ပဲရစ်ရှိတက္ကသိုလ်များ , Lyon ရှိတက္ကသိုလ်များ , အေသင်တက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့ရန်မြို့ကြီး ၃၂၆ ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်ပြင်သစ်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ ပဲရစ်မှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , အေသင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့်ပဲရစ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်မြို့တော် ၃၂၆၊ လီယွန်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ အေသင်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဈေးချိုသည်။
ပြင်သစ်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ပြင်သစ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင် Paris အတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ပါရီရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, လိုင်ယွန်အတွက်တွက်ချက်သောလူနေမှုစရိတ် နားလည်ရန် လိုင်ယွန်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အေသင်အတွက်ဂဏန်းတွက်စက်၏လူနေမှုစရိတ် နားလည်ရန် အေသင်ကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် ပြင်သစ်သို့လေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်၏ပြင်သစ်၌ပညာသင်ကြားရန်သင်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းသား၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ဖြတ်သန်းလိမ့်မည် ဗီဇာ ပြင်သစ်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြင်သစ်အတွက်တစ်ချိန်ကသင် ပြင်သစ်တွင်ဝင်ခွင့်ရ in ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် သို့ ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါ ဘို့ ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ပဲရစ် in ပဲရစ်တက္ကသိုလ် သို့ ပဲရစ်မှာလေ့လာပါ ဘို့ ပဲရစ်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် လိုင်ယွန် in လိုင်ယွန်တက္ကသိုလ် သို့ လိုင်ယွန်တွင်လေ့လာသည် ဘို့ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေး, ဝင်ခွင့် အေသင် in အေသင်တက္ကသိုလ် သို့ အေသင်၌လေ့လာပါ ဘို့ အေသင်ပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် ပြင်သစ်တွင်လေ့လာမှုငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in ပြင်သစ် သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် ပြင်သစ်တွင်ဝန်ခံချက် ပြင်သစ်မှာပညာသင်ဖို့အတွက်သူတို့ကအတွေ့အကြုံတွေလည်းဝေမျှကြတယ် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ပြင်သစ် အပါအဝင် ပဲရစ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း လိုင်ယွန်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အေသင်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် ပြင်သစ် မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် ပြင်သစ်.
ကျွန်တော်တို့၏ ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် ပြင်သစ်မှာ။
ငါတို့အသင်း ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါသင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု ပြင်သစ်တွင်ပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် ပြင်သစ် အတွက်လေ့လာနေသည် ပြင်သစ်မြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် ပဲရစ်တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ ပဲရစ်မှာလေ့လာနေ, လိုင်ယွန်ရှိကျောင်းဝင်ခွင့် ဘို့ လိုင်ယွန်တွင်ပညာသင်သည်, အေသင်အတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ အေသင်၌လေ့လာနေ
ရန်စီစဉ်လျှင် ပြင်သစ်တွင်လေ့လာမှုထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် ပြင်သစ်အတွက်မိတ်ဖက် ပြင်သစ်၌သင်ဝန်ခံချက်အဘို့, ငါတို့မှာ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် ပြင်သစ်သို့။
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ နှင့်အတူပြင်သစ်အဘို့ ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကုန်ကျစရိတ်များကိုကြိုတင်နားလည်ထားရန် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, ပြင်သစ်
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ ပြင်သစ်တွင်တက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် ပြင်သစ်တွင်တက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ပဲရစ်မှာလေ့လာပါ | Lyon တွင်လေ့လာပါ | အေသင်၌လေ့လာပါ
ပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးမိတ်ဖက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်အိမ်တစ်လုံးအောက်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်၌သင်တို့၏ ၀ င်ခွင့်ကိုလက်ခံပါကအပြည့်အဝထောက်ခံပါလိမ့်မည်။
ပြင်သစ်၌ပညာသင်ရန်အတွက် 1 point အဆက်အသွယ်တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ ၀ င်ခွင့်ကိုရိုးရှင်းအောင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ပြင်သစ်အတွက်သင်၏ပညာရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိမည်ဖြစ်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် ပဲရစ်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Lyon မှ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အေသင်၌ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ပြင်သစ်တွင်လေ့လာပါ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့သည့်အခါပထမသုံးလတွင်သင့်အားခွဲဝေချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်ပြင်သစ်အတွက်သင့်အတွက်အဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်မည့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊ ပြင်သစ်ရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ ပြင်သစ်၊ သင့်ကိုနားလည်ပြီးပြင်သစ်တွင်အချိန်ကုန်ငွေနှင့်အားထုတ်မှုကိုသက်သာစေမည့်သူတစ် ဦး တည်းကစောင့်ရှောက်သည်
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် ပြင်သစ်တွင်ဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or ပြင်သစ်အတွက်ကောလိပ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြင်သစ်နှင့် 105 နိုင်ငံများရှိအခြားတက္ကသိုလ်များသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခု
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထွက် Out ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာကျင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ပြင်သစ်တွင်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမဆိုလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ပြင်သစ်သို့ပညာရေး
ပြင်သစ်၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး ပြင်သစ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံလည်းအဖြစ်လူသိများ ပြည်ပမှာပြင်သစ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာပြင်သစ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ရေခြားမြေခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်ပြင်ပပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ ပြင်သစ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်အတိုင်ပင်ခံ။
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ ပြင်သစ် ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာပြင်သစ် ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ပြင်သစ်အဘို့။ ပဲရစ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်မှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ပဲရစ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာပဲရစ်မှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်မှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပဲရစ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ပဲရစ်မှာအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ လိုင်ယွန်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Lyon ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Lyon ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Lyon ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပရှိ Lyon ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Lyon ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများ, Lyon ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Lyon ရှိပြည်ပရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, လိုင်ယွန်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Lyon တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ အေသင်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်မှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အေသင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာအေသင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာအေသင်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အေသင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အေသင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , education consultancy in Athens, education consultants in Athens, abroad education consultants in Athens, study abroad consultants in Athens, overseas educational consultants in Athens and educational consultant in Athens today. student visa rules, France student visa processing time. Speak to student consultants for France. student consultants for Paris, education consultant in Paris, foreign education consultancy in Paris, student Consultants in Paris, educational consultancy in Paris, global educational consultants in Paris, abroad education consultants in Paris, educational Consultants in Paris, foreign education consultants in Paris, educational consultancy in Paris, abroad education consultant in Paris, student consultant for Paris, study consultancy in Paris, education consultancy in Paris, education consultants in Paris, abroad education consultants in Paris, study abroad consultants in Paris, overseas educational consultants in Paris and educational consultant in Paris today. student visa rules, France student visa processing time. Speak to student consultants for France. student consultants for Lyon, education consultant in Lyon, foreign education consultancy in Lyon, student Consultants in Lyon, educational consultancy in Lyon, global educational consultants in Lyon, abroad education consultants in Lyon, educational Consultants in Lyon, foreign education consultants in Lyon, educational consultancy in Lyon, abroad education consultant in Lyon, student consultant for Lyon, study consultancy in Lyon, education consultancy in Lyon, education consultants in Lyon, abroad education consultants in Lyon, study abroad consultants in Lyon, overseas educational consultants in Lyon and educational consultant in Lyon today. student visa rules, France student visa processing time. Speak to student consultants for France. student consultants for Athens, education consultant in Athens, foreign education consultancy in Athens, student Consultants in Athens, educational consultancy in Athens, global educational consultants in Athens, abroad education consultants in Athens, educational Consultants in Athens, foreign education consultants in Athens, educational consultancy in Athens, abroad education consultant in Athens, student consultant for Athens, study consultancy in Athens, education consultancy in Athens, education consultants in Athens, abroad education consultants in Athens, study abroad consultants in Athens, overseas educational consultants in Athens and educational consultant in Athens today.
ဘာဖြစ်သလဲ LivingFrance ၏ကုန်ကျစရိတ် or ပြင်သစ်လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ cost of living calculation for Franceပါဝင်သည် ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပြင်သစ်လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်.
ပဲရစ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | လိုင်ယွန်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | အေသင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ် | Paris တွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | Lyon တွင်နေထိုင်မှုအတွက်တွက်ချက်မှုတန်ဖိုး | အေသင်၌လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှု
ပြင်သစ်၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်၊ ပြင်သစ်၊ ဆေး ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ MBBS ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ် ပြင်သစ်၊ မာစတာဘွဲ့အတွက်ပြင်သစ်၊ ကောလိပ်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ်၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ပြင်သစ် ၊?
ကျွန်တော်တို့၏ ပြင်သစ်တွင်အသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ပြင်သစ်တွင်ဝင်ခွင့် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် စီးပွားရေးသင်တန်းဝန်ခံချက်ပြင်သစ်, mba ဝန်ခံချက်ပြင်သစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ခံမှုပြင်သစ်, ပြင်သစ်မာစတာသင်တန်းများအတွက်ဝန်ခံချက်, ပြင်သစ်ကောလိပ်ကျောင်းဝင်ခွင့်အထောက်အပံ့, ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကိုပြင်သစ်, ပြင်သစ်ဝန်ခံချက်, ပြင်သစ်ဘွဲ့အတွက်ဝန်ခံချက်, MBBS ဝန်ခံချက်ပြင်သစ်, ကောလိပ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပြင်သစ်, ဝင်ခွင့်များပြင်သစ်, ပြင်သစ်ကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီ, ကောလိပ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပြင်သစ် နှင့် ပြင်သစ်.
ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ပြင်သစ်များအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ ပြင်သစ်တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, overseas educational consultants in France, ပြင်သစ်၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်ပရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်ပရှိပဲရစ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ , ပြည်ပပညာရေး consu ပါရီရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ၊ ပဲရစ်ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံခြားရှိလီယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယွန်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနိုင်ငံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အေသင်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှအေသင်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှအေသင်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိတက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများတွင်တက်ရောက်ရန်အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှုကိုသင်ပေးပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလားသို့မဟုတ်ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းပညာရေး or ပြင်သစ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ပြင်သစ်များအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
ပဲရစ်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | လိုင်ယွန်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | အေသင်၌အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ပဲရစ်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | လိုင်ယွန်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | အေသင်၌အွန်လိုင်းသင်တန်း
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်, ပြင်သစ်ပညာရေး ဦး စီးဌာန or ပြင်သစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် ပြင်သစ်ရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် ပြင်သစ်တွင်နိုင်ငံခြားပညာသင်ပါ or ပြင်သစ်တွင်ပညာသင်ပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာန, ပြင်သစ် / ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြင်သစ်။
ပဲရစ်မှာလေ့လာပါ | Lyon တွင်လေ့လာပါ | အေသင်၌လေ့လာပါ | ပဲရစ်တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Lyon တွင်ကျောင်းတက်သည် | အေသင်၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ
ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ ပြင်သစ်ကျောင်းသားကျောင်းသားဗီဇာဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ၊ ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းများ၊ ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ပြင်သစ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲနဲ့ အချိန်အဆက်အသွယ် ပြင်သစ်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ကျွန်ုပ်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျောင်းသား ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ကျောင်းသားဗီဇာပြင်သစ်နိုင်ငံမှတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်ရရှိပြီးနောက်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ ပြင်သစ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က ပြင်သစ်ကျောင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် or ပြင်သစ်ကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြင်သစ်အတွက်တက္ကသိုလ်၌တည်၏။ အဖြစ်လူသိများ, ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်တွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultant in France, education consultancy in France, foreign education consultants in France, study abroad consultants in France, abroad education consultant in France, student consultant for France, education Consultancy in France, study consultancy in France, abroad education consultants in France, educational consultancy in France, global educational consultants in France, education consultant in Paris, educational consultancy in Paris, educational consultant in Paris, foreign education consultants in Paris, student consultants for Paris, abroad education consultant in Paris, overseas educational consultants in Paris, university consultancy in Paris, student Consultants in Paris, abroad education consultants in Paris, education consultancy in Paris, foreign education consultancy in Paris, study consultancy in Paris, educational Consultants in Paris, study abroad consultants in Paris, abroad education consultants in Paris, global educational consultants in Paris, education consultants in Paris, student consultant for Paris, educational consultancy in Paris education consultant in Lyon, educational consultancy in Lyon, educational consultant in Lyon, foreign education consultants in Lyon, student consultants for Lyon, abroad education consultant in Lyon, overseas educational consultants in Lyon, university consultancy in Lyon, student Consultants in Lyon, abroad education consultants in Lyon, education consultancy in Lyon, foreign education consultancy in Lyon, study consultancy in Lyon, educational Consultants in Lyon, study abroad consultants in Lyon, abroad education consultants in Lyon, global educational consultants in Lyon, education consultants in Lyon, student consultant for Lyon, educational consultancy in Lyon education consultant in Athens, educational consultancy in Athens, educational consultant in Athens, foreign education consultants in Athens, student consultants for Athens, abroad education consultant in Athens, overseas educational consultants in Athens, university consultancy in Athens, student Consultants in Athens, abroad education consultants in Athens, education consultancy in Athens, foreign education consultancy in Athens, study consultancy in Athens, educational Consultants in Athens, study abroad consultants in Athens, abroad education consultants in Athens, global educational consultants in Athens, education consultants in Athens, student consultant for Athens, educational consultancy in Athens . Speak to ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
ပြင်သစ်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ပြင်သစ်မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားမည်သို့ခြားနားသနည်း ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ပဲရစ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Lyon ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အေသင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or အေသင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ ပြင်သစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, foreign education consultants in France, ပြင်သစ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်တွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်အတွက်တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြင်သစ်၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံပြင်သစ်နိုင်ငံမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိပညာရပ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိပြင်သစ်နိုင်ငံပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေး ပဲရစ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပဲရစ်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ ပါရီရှိပြည်ပရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပါရီရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယွန်ရှိပဲရစ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၏ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယိုတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယွန်တွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လီယွန်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လိုင်ယွန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ Lyon ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံခြားရှိ Lyon ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိ Lyon ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ အတိုင်ပင်ခံ အေသင်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်၌လေ့လာမှုအတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်, Ath အတွက်တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ en, နိုင်ငံခြားတွင်အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အေသင်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အေသင်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ ပြင်သစ်
ပါရီရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့် | လိုင်ယွန်တက္ကသိုလ်ရှိကျောင်း ၀ င်ခွင့် အေသင်တက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့်
Ministère de l'Outre-Mer- ပြင်သစ်ပင်လယ်ရပ်ခြားဝန်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.diplomatie.fr/index.html)
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်နယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (www.fonction-publique.gouv.fr)
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.culture.fr/)
ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.education.gouv.fr/)
INSEE - Instist National de la Statistique et des Etudes Economiquesပြင်သစ်စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေး
Bourse de ပဲရစ်ပြင်သစ်စတော့အိတ်ချိန်းများအသင်း (Euronext France)
အလုပ်အကိုင်၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.emploi-solidarite.gouv.fr)
စီးပွားရေး၊ ဘဏ္Financeာရေးနှင့်စက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန (www.minefi.gouv.fr)
စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသ ၀ န်ကြီးဌာန (www.agriculture.gouv.fr)
Aéroportsက de ပဲရစ်
Côte d'Azur အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်
Marseille Provence လေဆိပ်
Destination France - ခရီးသွား Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
ပြင်သစ် Riviera အပြင်
ပဲရစ်ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် itors ည့်သည်များဗျူရို
Ministère de la ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
စင်တာ Georg Pompidou
Georges Pompidou Center (BPI) ရှိပြည်သူ့သတင်းအချက်အလက်စာကြည့်တိုက်
la Grotte က de Lascaux
Jules Verne ပြတိုက်
စင်တာ d'Etudes Supérieures Industrielles ပဲရစ်
National d'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes
Ecole Catholique d'Arts & မီတာ
Ecole Centrale က de Lille
Ecole Centrale က de Lyon
Ecole Centrale က de Nantes
ဗိသုကာက de နန်စီ Ecole
Ecole က de l'Air
Ville de Paris ၏အင်ဂျင်နီယာများ
Ecole Européenne de Chimie, Polymèresနှင့်Matériaux de Strasbourg
စက်မှုဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ် Ecole Française de Papeterie
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များနှင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာ Ecole Nationale de la
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များနှင့် ole Ecole Nationale de la စာရင်းအင်း
Ecole Nationale က de l'လေကြောင်း Civile
Ecole Nationale des သိပ္ပံGéographiques
Saint-Etienne Ecole Nationale d'Ingénieurs de
စက်မှုကဏ္ des စက်မှုလုပ်ငန်းများ Agricoles နှင့် Alimentaires များအတွက်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းပညာ
Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand Ecole Nationale d'Ingénieurs des
Tarbes Ecole Nationale d'Ingénieurs de
Strasbourg Ecole Nationale du Génie de l'Eau နှင့် de l'Environnement de
Ecole Nationale Supérieurက de Géologieက de နန်စီ
Microtechniques နှင့် ole Ecole Nationale Supérieur de Mécaniques
Ecole Nationale Supérieurd'Ingénieurs de Constructions Aéronautique
Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries မှ Alimentaires
Ecole Nationale Supérieure de Biologie လျှောက်လွှာနှင့်အာဟာရနှင့်à l'Alementation
Ecole Nationale Supérieureက de Chimie de Lille
Ecole Nationale Supérieureက de Chimie de Montpellier
Ecole Nationale Supérieureက de Chimie က de Mulhouse
Ecole Nationale Supérieureက de Chimie က de Rennes
Ecole Nationale Supérieureက de Chimie de Toulouse
Bordeaux ၏ Ecole Nationale Supérieure de Chimie နှင့် de Physique de Bordeaux
Ecole Nationale Supérieure de l'Arononautique et de l'Espace
Grenoble ၏ Ecole Nationale Supérieure d'Electronique et de Radioelectricite de
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique နှင့် de applications များ
Grenoble Ecole Nationale Supérieureက de Physique de Grenoble
Ecole Nationale Supérieureက de Physique de Strasbourg
ဝိဇ္ဇာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှစထရာဘတ်မြို့ရှိ Ecole Nationale Supérieure des
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries အထည်အလိပ်
Ecole Nationale Supérieure des Minines d'Alès
ပဲရစ် Ecole Nationale Supérieure des Mines
St-Etienne Ecole Nationale Supérieure des
Bretagne ၏ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ Ecole Nationale Supérieure des
တယ်ရီဆက်သွယ်ရေး de Paris ၏ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ
Grenoble ၏ Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique နှင့် de Mécanique de
Grenoble Ecole Nationale Superieure d'Informatique et de Mathematiques Appliquees de
Nationalcole Nationale Supérieured'Ingénieurs de Constructions Aéronautiques
Ecole Nationale Supérieured'Génie Chimique
Grenoble Ecole Nationale Supérieure d'Ingenieurs Electriciens
Valenciennes နှင့် Ecole Nationale Supérieured'Ingénieurs en Energétique de energieurs
Montere နှင့် Ecole Nationale Supérieure du
Ecole Nationale Supérieureလျှပ်စစ်နှင့်Mécanique
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပြင်သစ်ပညာရေး ဦး စီးဌာန / ပြင်သစ်ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။